စူပါဟီးရိုးများကိုရုပ်ရှင်များထဲသို့ခိုးသွင်းရန်ရယ်စရာနည်းလမ်းများ။ KABOOM မှ Superheroes များသည်အတန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခိုးဝှက်ကြသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံ (သို့) အတန်းထဲသို့အဆာပြေခိုး ၀ င်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါအင်အားကြီးနိုင်ငံများရှိခြင်းသည်သေချာသည်။ Kaboom မှဤအရူးစူပါဟီးရိုးအစားအစာအတုများနှင့်ရယ်စရာအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ မင်းဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်ရင်မင်းရုပ်ရှင်တွေထဲကိုစူပါဟီးရိုးတွေကိုစတေးဖို့နည်းလမ်း ၈ ချက်ကိုလည်းကြိုက်နိုင်တယ်။ KABOOM ရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအစားအစာကိုခိုးဝှက်နည်း။ ” https://youtu.be/k7pMjTv-UPc ဤဗီဒီယိုတွင်သုံးသောတေးဂီတကိုနှစ်သက်ပါသလား။ EpidemicSound တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တေးဂီတကို https://bit.ly/2JcUlBa တွင်တွေ့နိုင်သည် ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖန်တီးမှုများသည်ဤဗီဒီယိုပါအကြောင်းအရာများ၏တိကျမှု၊ အသုံးချနိုင်မှုနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုမဆိုအာမခံချက်မပေးပါ။ ဤဗွီဒီယိုသည်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာတင်းကျပ်စွာပြုလုပ်ထားသည်။ သင်ဤဗီဒီယိုတွင်စိတ်ကူးများကိုအသုံးချလိုလျှင်သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်သင်အပြည့်အ ၀ တာဝန်ယူပါသည်။ ဤဗီဒီယို၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖန်တီးမှုများသည်ဤဗီဒီယိုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုတာဝန်ရှိပါသည်။ ဤဗီဒီယိုတွင်ပြသသောထုတ်ကုန်များနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်များအားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏အမှတ်တံဆိပ်များ (သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ထောက်ခံချက်ကိုမဆိုလိုပေ။ KABOOM သို့စာရင်းပေးသွင်းပါ။ KABOOM! စပိန် https: //www.youtube.com/channel/UCKFP ... KABOOM! ပေါ်တူဂီ https: //www.youtube.com/channel/UCfvQ ... KABOOM! အာရဗီ https: //www.youtube.com/channel/UCp4Y ... KABOOM! အင်ဒိုနီးရှား https: //www.youtube.com/channel/UCqbF ... KABOOM! ချဲ့ရန် https: //www.youtube.com/channel/UCSxi ... ထိပ်တန်း Kaboom သီချင်းစာရင်းများ ကျောင်းပြန်! https: //www.youtube.com/watch? v = AuCtF ... နောက်ပြောင်မှုများ https: //www.youtube.com/watch? v = ArOPW ... အလှအပနှင့် Girly Hack များ https: //www.youtube.com/watch? v = ZN5Lm ... #စူပါဟီးရိုးများ #SneakFood #KABOOM!
If you enjoyed this video, you might also like ”8 Ways to SNEAK SUPERHEROES INTO THE MOVIES! How to Sneak Food ANYWHERE by KABOOM!” https://youtu.be/k7pMjTv-UPc
RICH BECOME BROKE for 24 HOURS || Rich VS Poor Family! How to Make Money by Kaboom!
I Was Adopted byaBILLIONAIRE FAMILY! Poor Girl inaRich Family | Rich VS Broke by KABOOM!